Posted on Waxaa laga yaabaa 16, 2022 Waxaa laga yaabaa 16, 2022 by Fei (aasaasaha)
2 Garson & Shaw
3 Retex Textiles Inc.-Alaab-qeybiyeyaasha kabaha la isticmaalo ee jumlada ah ee Cambodia
4 Hal qayb oo ka mid ah CHILLEUS DE CRUZ LTD
5 Hal qayb oo ka mid ah Jiangyin Bowell Technology Co., Ltd.
6 Iibiyeyaasha Kabaha La Isticmaalay Jumlada ee Cambodia Gabagabada
Ma waxaad ka raadinaysaa alaab-qeybiye jumlad ah oo dharka la isticmaalo gudaha Cambodia? Wax ka badan ha ka eegin liiskayaga 5-ta alaab-qeybiye ee ugu sarreeya dalka. Waxaan soo diyaarinay liiska alaab-qeybiyeyaasha ugu sumcadda iyo kalsoonida badan, si aad u heshid alaab-qeybiye ku habboon baahiyahaaga. Akhri si aad wax badan uga ogaato alaab-qeybiye kasta iyo waxay bixiyaan.
Hissen Global, oo ah iibiyaha dharka gacan labaad ee darajada ugu sarreeya ku takhasusay suuqa caalamiga ah, wuxuuna ku lahaa 3 dhir kala-soocidda oo waaweyn gudaha Guangzhou, Shiinaha.
Shirkadu waa meel aad ugu fiican in lagu iibiyo jumlada dharka la isticmaalo ee jumlada. Xakamaynta tayada la ammaano awgeed, waxay macaamiishooda siin karaan qiimaha lacagta dharka la isticmaalay.
Hissen waxa kale oo uu leeyahay xulasho weyn oo ah dharka la isticmaalo ee ragga iyo dumarka. Waxaad ka heli kartaa dharka la isticmaalay oo leh qaabab iyo cabbirro kala duwan. Wax soo saarkooda aasaasiga ah waxaa ka mid ah kabaha la isticmaalay, sida kabaha Brand, Kabaha isku dhafan, iyo kabaha ciyaaraha ee la isticmaalay.
Ganacsiga dharka ee gacanta labaad ee shirkadu waxa uu leeyahay dadaalka ugu badan, iyada oo labbis badan oo la isticmaalay ay kayd ugu jiraan macaamiishooda. Waxay ka dhigtaa ilaha ugu kalsoonaan karo ee laga helo jumlada dharka labaad.
Garson & Shaw Europe waa shirkad gacan labaad ka sameysa alaab-qeybiyaha oo ku taal Slovakia. Waxay leeyihiin ganacsi dhar gacan labaad ah oo leh in ka badan 6 qaaradood.
Garson & Shaw waxaa loogu talagalay inay siiso macaamiishooda qaaliga ah dharka gacan labaad oo tayo sare leh. Waxay ururiyaan oo ay ka helaan dharka la isticmaalay shirkadaha dhaqaale ururinta ee horumaray iyo bulshooyinka maxalliga ah.
Dharkooda la isticmaalay si fiican ayaa loo eegaa tayada ka hor inta aan loo dirin macaamiishooda, iyadoo la hubinayo in kaliya alaabta ugu fiican la keeno. Waxayna macaamiishooda u soo bandhigi karaan noocyo kala duwan oo dhar ah oo la isticmaalay oo heerar u qalma ah.
Dharka gacan labaad ee jumlada ah ayaa ah ganacsi si xawli ah u socda, waxaana safka hore kaga jira Garson & Shaw oo bixiya dharka gacan labaad oo tayo leh oo qiimo jaban ah.
Retex Textiles Inc.-Alaab-qeybiyeyaasha kabaha la isticmaalo ee jumlada ah ee Cambodia
Retex Textiles Inc. waxay ku hawlan tahay iibinta dharka la isticmaalo ee adduunka oo dhan suuqa labiska gacanta labaad. Iyadoo waayo-aragnimo ka badan 20 sano ah ee ganacsiga dharka la isticmaalay. Waxay dhiseen aasaas aad u wanaagsan iyo saldhig macmiil si ay u gaaraan himilooyinkooda hamiga ah.
Dharka loo yaqaan 'Retex Textiles' waxay rari karaan kabaha gacanta labaad qiyaastii 800 oo bacood oo miisaankoodu yahay 45000lbs, waxayna hadda darajeynayaan celcelis ahaan 350,000 rodol. ee alaabta ceeriin bishii. Waxay u ogolaanaysaa jumlo-iibayaal badan oo dharka gacanta labaad ah inay doortaan la-hawlgalayaasha iyaga.
Retex Textiles waxay dhistay sumcad xoog leh warshadaha dharka la isticmaalay iyada oo ay ugu wacan tahay kartideeda tartan iyo adeeg la isku halayn karo.
Hal qayb oo ka mid ah CHILLEUS DE CRUZ LTD
Shirkadda, CHILLEUS DE CRUZ LIMITED waxay caan ku tahay bixinta dharka gacan labaad oo tayo sare leh, xarunteeduna tahay London. Ganacsiga waxaa la aasaasay 1978-kii, ilaa hadda waxa uu noqday mid ka mid ah kuwa ugu horreeya jumlada ee Yurub oo dhan iyaga oo diiradda saaraya Afrika.
CHILLEUS DE waxay caan ku tahay u heellanaanta ganacsiga dharka gacanta labaad. Waa nooc ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha dharka ee Yurub iyadoo diiradda la saarayo Afrika.
Waxa CHILLEUS DEs ka duwan yahay tartamayaasha kale waa feejignaantooda faahfaahinta. Dhammaan kabaha kabaha ay isticmaaleen ayaa si gaar ah loogu duudduubay alaabada baakadaha gudaha weelasha.
Haddii aad raadinayso alaab-qeybiye la isticmaalay oo ku siin kara tayo sare leh, dhar si tartiib ah loo isticmaalay qiimo jumlo, markaa Chilleus de Cruz Limited ayaa kuu ah alaab-qeybiyahaaga.
Hal qayb oo ka mid ah Jiangyin Bowell Technology Co., Ltd.
Shirkadda Jiangyin Bowell Technology waa dhoofiye jumlad ah oo dharka gacanta labaad ah oo ku hawlan warshadaha dharka la isticmaalay. Shirkadda waxaa la aasaasay 2006 iyada oo leh 100 shaqaale daacad ah. Iyaga oo leh 16 sano oo khibrad ganacsi labiska ah, waxay hirgeliyeen falsafada casriga ah ee maareynta ganacsiga.
Shirkaddu waxay ku faantaa nidaamkeeda hawlkarnimo ee hufnaanta sare leh, oo leh shaqaale si fiican u tababaran iyo kooxda iibka oo tayo leh. Waxayna heleen shahaadooyin sida CE, SGS, ISO9001.
Haddii aad raadinayso alaab-qeybiye la isticmaalay oo ku siin kara tayada sare leh, dharka si tartiib ah loo isticmaalo ee qiimaha jumlada, markaa Jiangyin Bowell ayaa adiga kuu ah.
Iibiyeyaasha Kabaha La Isticmaalay Jumlada ee Cambodia Gabagabada
Haddii aad raadinayso il la isku halayn karo oo la awoodi karo oo dhar la isticmaalay jumlo, Cambodia waa meel fiican oo laga bilaabo. Wadanku waxa uu leeyahay alaab-qeybiyeyaal sumcad leh oo ku siin kara alaab tayo sare leh oo qiimo jaban leh. Markaad la xidhiidho alaab-qeybiyeyaashan, hubi inaad waydiiso cabbiraadaha xakamaynta tayada iyo wakhtiyada keenista si aad u hubiso inaad helayso heshiisyada ugu fiican ee suurtogalka ah.
Views Views: 48
Entry waxa loo posted in Industry News iyo tagged hissen, 5-ta ugu Sareysa ee Kabaha La Isticmaalo Jumlada ee Cambodia.